Q & A – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
ရေကြီးတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတို့အတွက် . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အခုလို ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာ ရေကြီးတဲ့ဒေသက ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်ပါသလဲ။ A. ရေကြီးတဲ့အခါမှာ ဆီးချိုရှိသူတွေက ရေထဲစိမ်နေရတဲ့အတွက် အအေးမိတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ ရေနဲ့မထိတွေ့အောင်နေကြည့်မယ်။...
ဆီးချိုသမားကို ဘယ်လိုကိုယ်ချင်းစာမလဲ . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရှိသူ အိမ်သားတစ်ဦးကို မိသားစုဝင်တွေက သီးသန့်ထမင်း/ ဟင်းချက်ကျွေးတာ၊ မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲ သီးသန့်စားခိုင်းတာတွေ လုပ်တာရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ တချို့ဝေဒနာရှင်တွေက စိတ်အားငယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို...
ထိုင်ရာမထ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ထိရောက်မှုရှိသလား . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ ထိုင်ရာမထ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ရောဂါထိန်းချုပ်မှုမှာ သင့်တော်ပါသလားဆရာ။ A. သီအိုရီအရ လှုပ်နေရင် ထိရောက်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သုံးချက်နဲ့တော့ ပြည့်စုံရပါတယ်။ (၁)...
—၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့် နားပြည်ယိုတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. နားပြည်ယိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အပြင်နားကြောင့် နားပြည်ယိုတာရှိသလို အလယ်နားကြောင့် နားပြည်ယိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ အပြင်နားကြောင့်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အန်လွန်းလို့ ဘာစားရမလဲ..
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်စဆောင်ချိန်မှာ နေလို့မကောင်း၊ အန်ပဲ အန်ချင်နေလို့ ဘာမှလည်း မစားချင်ပါဘူး။ မစားတော့လည်း အားပြတ်လို့ ဘာစားပေးရင်ရမလဲ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန် နေရထိုင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာမရှိဆုံးအချိန်ကတော့ Morning Sickness...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဖောလိတ်ဓာတ်က ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ …
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့ ဖောလိတ်ဓာတ်ပါတာစားဆိုပြီး ပြောကြလွန်းလို့ပါ။ ဖောလိတ်ဓာတ်က ဘာကြောင့် အရေးကြီးရတာလဲရှင့်။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဖောလိတ်ပါ။ စားတဲ့အစားတွေမှာ ဖောလိတ်ဓာတ်ပါဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အစားအစာဆိုရင်တော့ ဖောလိတ်ဓာတ်ပေါ့။...
မွေးရာပါ အကြောလျှော့ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း (Myotonia Congenital)
—၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး )နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. Myotonia Congenital ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲသွားခြင်း (Genetic Mutation) ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကြရင်...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားပေမယ့် သွေးပြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါ ဆရာ။ သွေးပြစ်တာက ဘယ်အချိန်ဆိုရင် ပြန်ကောင်းနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. သွေးပြစ်တယ်ဆိုတာ ဆေးပညာအရ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ သေချာမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သွေးပြစ်တယ်ဆိုတာ...
—–၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. နှာစေးတာ၊ နှာမွှန်တာဖြစ်ပြီးရင် ညညဆို နှာခေါင်းပိတ်တတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပိတ်လွန်းလို့ ညဘက်အိပ်မပျော်တာ မကြာခဏပါ။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. များသောအားဖြင့် လူတွေက...
အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးရဲ့  ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ A. အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးရှိတဲ့အခါမှာလည်း ဘီပိုးလိုပဲ အစောပိုင်းမှာ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ၊ နိုင်ငံခြားသွားဖို့၊ သွေးလှူဖို့ သွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ စီပိုးတွေ့ကြတာများပါတယ်။...
Page4of 118‹ Previous12345678Next ›Last »